November 25, 2020 RESTBET 497 RESTBET497 8
ယခုရာသီစူပါလိဂ်မှာထိပ်ဆုံးကို ဦး ဆောင်နေတဲ့Fenerbahçeမှာအခြေအနေမကောင်းဘူး။ အဝါရောင်ရေတပ်အပြာမသန်စွမ်းမှုသတင်းကို Serdar Aziz မှရရှိခဲ့သည်။ အတွေ့အကြုံရှိသောဘောလုံးကစားသမားသည်သူ၏ဒူးနာခြင်းကြောင့်လေ့ကျင့်ခြင်းတွင်မပါ ၀ င်နိုင်ကြောင်းသိရှိခဲ့ရသည်။
Serdar Aziz သည် Erol Bulut ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင်ပြုလုပ်သောလေ့ကျင့်မှုတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ခြင်းသည်အသင်းအတွင်းဒဏ်ရာရကစားသမားမဟုတ်ပါ။ Gokhan Gonul သည်အစာအိမ်၊ အပြာနုရောင်မျက်ရည်များတ ၀ ိုက်တွင်ပေါင်ပေါင်inရိယာရှိလေ့ကျင့်မှုတွင်တက်ရောက်ရန်မစွမ်းနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ကလပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်မှာဆာဒါ Aziz သည်Fenerbahçe Can Bartu ဝန်ဆောင်မှုများတွင်နည်းပြ Erol Bulut ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်တွင်ပြုလုပ်သောလေ့ကျင့်မှုတွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်းရေးသားခဲ့သည်။
Jose Sosa, Mbwana Samatta နှင့် Tolga Ciğerciတို့သည်အဖွဲ့နှင့်သီးခြားစီဆက်လက်အလုပ်လုပ်သည်။ တုပ်ကွေးကူးစက်မှုမှလွတ်မြောက်ခဲ့သူ Mauricio Lemos သည်အသင်းတွင်သူ၏နေရာတွင်ရပ်တည်ခဲ့သည်။
SUPERTOTOBET0120 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER RESTBET497 FENERBAHÇE’DE SERDAR AZİZ ŞOKU! RESTBET497 FENERBAHÇE’DE SERDAR AZİZ ŞOKU! RESTBET497 FENERBAHÇE’DE SERDAR AZİZ ŞOKU! RESTBET497 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER RESTBET497 EROL BULUT’TAN DERBİ ÖNCESİ İDDİALI SÖZLER BETBABA128 FENERBAHÇE’DE SERDAR AZİZ ŞOKU! BETPAS423 FENERBAHÇE’DE SERDAR AZİZ ŞOKU! BETPAS423 FENERBAHÇE’DE SERDAR AZİZ ŞOKU! SUPERTOTOBET0120 FENERBAHÇE’DE SERDAR AZİZ ŞOKU!
EMRE November 25, 2020 at 9:20 pm
FATMA November 29, 2020 at 11:10 am
ÖNDER November 29, 2020 at 12:50 pm
ÇINAR December 1, 2020 at 1:20 pm
IŞIK MELİKE December 1, 2020 at 5:10 pm
CAN December 1, 2020 at 10:30 pm
ALİCAN December 3, 2020 at 6:40 am
SAYGIN December 5, 2020 at 3:30 pm